Ny rehetra momba ny kitapo alika: karazana ary ny fomba fitsitsiana! | Tontolo alika
Ny kitapo ho an'ny alika dia famenonan'ny tena ilaina indrindra, isaky ny mandeha mitsangantsangana miaraka amin'ny volonay izahay. Satria io no fotoana hanararaotan'izy ireo manala ny tenany sy antsika, manangona azy ireo, mitazona ny faritry ny daholobe ho madio. Satria fototra sy ilaina tokoa izy ireo, dia tsy maintsy fantarintsika koa ny karazany sy ny tombony azony avy.
Satria amin'ny lahasa toa izao dia mila fitaovana tsara indrindra foana isika fa mitsitsy arak'izay azo atao ary na dia toa tsy toa izany aza dia vitantsika izany. Mila manaraka fotsiny ny torohevitra ilaozanay ianao, mba hikarakaranao ny biby fiompinao sy ny tontolo iainana indraindray isika dia manadino kely.
1 Karazana kitapo alika
1.4 Avy amin'ny sinoa
2 Ahoana ny fomba hitsitsiana vola amin'ny fividianana kitapo alika
3 Dispenser kitapo ho an'ny alika tsirairay: Ilaina
Karazana kitapo alika
Amazon Basics - Kitapo ...
Kitapo YORJA ho an'ny ...
PURENV Biodegradable ...
Marina fa imbetsaka isika no miakatra mora foana amin'ireo karazana kojakoja ireo, hahafahan'izy ireo manao ny asany ary tsy hahita zavatra hafa isika. Fa marina fa ny kalitao indraindray tsy izay ilaintsika. Noho izany, tsy maintsy ataontsika antoka foana fa ny sandan'ny vola dia azo antoka kokoa. Toa mahita safidy azo atao tsara isika anio, vita amin'ny fitaovana tsara izay manampy ny tontolo iainana ary amin'ny lafiny iray, koa ny paosintsika. Mazava ho azy fa mety ho mahia kely kokoa noho ny maodely hafa izy ireo. Ankoatr'izay, raha kitapo mahazatra izy ireo dia matetika tsy ekolojika.
Izy ireo dia iray amin'ireo safidy voafidy ao anaty kitapo alika. Tokony ho fantatrao fa ny akora biodegradable dia ho simba voajanahary rehefa mandeha ny fotoana.. Toa priori tsara ity, saingy hita fa tsy fantatra ny fotoana tena izy, ary mety maharitra herintaona ka hatramin'ny am-polony maro. Ny ankamaroany dia vita amin'ny vatan-katsaka, izay midika fa voajanahary kokoa izy ireo ary afaka ariana ao anatin'ny fotoana fohy noho izay voalaza. Tena mahatohitra izy ireo ary manao ny asany 100%.
Kitapo kitapo alika BIOOK ...
Ny fizotry ny zezika dia tsy mamela karazana residu misy poizina, noho izany dia voajanahary kokoa. Ity karazana kitapo ho an'ny alika alika ity dia manimba amin'ny fomba voajanahary, araka ny efa nolazainay. Midika ve? Izy ireo dia mamokatra gazy karbonika ary koa rano sy zavatra tsy mitambatra, fa tsy mamela ambina hafa mety hanimba ny tontolo iainana.
Lasa zezika voajanahary ho an'ny tany izy ireo. Ka rehefa mifidy azy ireo dia izy ireo foana no voalohany ao anaty lisitra, mahazaka rehefa mampiasa azy ireo.
Avy amin'ny sinoa
Indraindray raha tsy mijanona mitady ny kitapo tsara indrindra isika, dia mitsambikina amin'izay akaiky antsika, izay fivarotana ara-toekarena. Misy hatrany akaikin'ny trano misy antsika ary ao no hahitantsika karazan-kitapo isan-karazany. Marina anefa fa raha mijery ianao, mazàna izy ireo matetika ary tsy dia tsara foana io fahatsapana io satria matetika kokoa no tapaka izy ireo ary rehefa manaisotra ny diky ianao dia mahamarika azy bebe kokoa, toy ny hoe eo am-pelatananao ireny. Ka tsy io foana no safidy mety indrindra.
Ahoana ny fomba hitsitsiana vola amin'ny fividianana kitapo alika
Izahay dia miahiahy ny zava-drehetra amin'ny ankapobeny, saingy marina fa kely kokoa ny paosintsika. Indraindray isika dia mandany fotoana be mampitaha marika sasany amin'ny hafa, safidy vitsivitsy na magazay amin'ny hafa, saingy tsy fantatsika velively hoe inona no dingana tena horaisintsika mba hahatratrarana ireo tahiry ireo. Ary koa, ny zavatra tsara indrindra amin'ireto tranga ireto dia ny mividy fonosana misy singa maromaro. Ny fividianana betsaka dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra. Satria na dia tsy maintsy mandoa vola amin'ny voalohany aza isika, amin'ny farany dia mandoa izany.
Satria raha manomboka manao ny matematika isika, dia ho mora kokoa ny kitapo tsirairay raha oharina amin'ny mividy singa vitsy kokoa. Noho izany, tsy zava-dehibe fotsiny ny mijanona amin'ny tarehin-javatra izay hitantsika fa priori, fa kosa ny mieritreritra izay vidin'ny singa tsirairay.
Kitapo BPS® Poop ...
Ohatra tsara dia ireo fonosana izay misy singa 200 mahery, toa be dia be izy io, saingy azo antoka fa hampiasa ny tsirairay amin'izy ireo isika. Izay ihany no ahafahantsika mitsitsy amin'ity famenony tena ilaina ity.
Dispenser kitapo ho an'ny alika tsirairay: Ilaina
Raha te-handamina tsara na hitahiry ny kitapo rehetra, tsy misy toa an'ireo dispenser-dry zareo. Araka ny tondroin'ny anarany dia karazana kaontenera izay hivoahan'ny kitapo rehetra izy. Hevitra tsara foana ny tsy hanariana ny tsirairay amin'izy ireo hanary vatasarihana. Marina fa rehefa mividy fonosana isika dia miaraka aminy matetika. Raha atao teny hafa, dia kojakoja ilaina io.
igadgitz Home U7168 ...
Indraindray anefa hitantsika fa afaka misaraka izy ireo ary noho izany antony izany dia tsy tokony hanahy isika satria misy koa ny kojakoja fitehirizana. Eny, dispensers azo vidiana misaraka amin'ny kitapo ary ankoatr'izay dia misy fivarotana maro izay efa mivarotra azy ireo miaraka amina endrika sy loko isan-karazany, ka eo foana ny originality. Azonao atao ny mitondra azy miaraka aminao mba tsy hanananao ny kitapo ho an'ny alika!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Kitapo alika
Fafao lena ho an'ny alika
Kely alika manjelanjelatra